Yaa Oromoo gahee kee bahi, uumata guddaa Oromoo waami, guyyaan boruu guyya inijifannooti. -
Yaa Oromoo gahee kee bahi, uumata guddaa Oromoo waami, guyyaan boruu guyya inijifannooti.
Can’t Sleep<<<Dammaqi Oromoo>>>
____Guyyaa Boruu ____
Yeroo amma kana uummata dammaksaatti jiru, sa’aa tokkoof eegachaatti jirra _Qeerroo _
Proud @ Ambo, Ayiraa, Mandii, Gidda, Horro guduruu,Gudar,Najjoo, Haromaya, Mattuu ,jimma………..Hanga daangaa Sudaanitti karaan mukaan dhagaan cufamaatti jira.
Yeroo ammaa kanatti Qeerron gara Ayiraa, Mandii, Najjoo, Amboo, Gudar, Giddaa, Horroguduru,Mattuu fi Baalee Bosonatti baqatee bosona keessaa bilbilaatti jira.Naanoleen kuni injifannoo guddaa gonfachaauun diina to’annaa jala jiraachu isaaaani ibsameera.OPDO fi Wayyaneen heddu raafamuun namoota abba aangoo ta’an uummata kadhachuutti boobaasteetti.Gaazexaaleeni fi midiyaaleen adda addaa raafamuu wayyaanee fi OPDO gurra isaan buute ibsaniiru.
Qeerroon guyyan boruu haala adda ta’een itti fufa jechuun ejjenno cimaa qabatera.
Barattootni guyya boruu maatii isanii fi uummata yerootti dadammaksanidha jedhu.
Guyya boruu ilma halagaa Haromayaa irratti boombii darbate irrattis tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedha.
Kanaaf, yaa Oromoo gahee kee bahi, uumata guddaa Oromoo waami, guyyaan boruu guyya inijifannooti.
Previous POOLISIIN FEDERAALAA FI POOLISIIN OROMIYAA WAL HUDHUUF MORMA WAL QABDEETTI JEDHAMA
Next WAAMICHA HIRIIRA NAGAYAA DHALAATOOTA OROMOO NANNOO FINFINNEE JIRAATANIIF